MDC, MKD, Zapu Oronga Kuramwa Sarudzo Kana Zvinhu Zvisina Kugadziriswa
Chikumi 05, 2013
HARARE — Vatungamiri vemapato anoti Zapu, Mavambo Kusile Dawn, MKD, Zanu Ndonga pamwe nemapoka maviri eMDC ari muhurumende vanoti havasi kuzopinda musarudzo kana misariridzwa yose yecmuchibvumirano chezvematongerwo enyika isna kugadziriswa.
Vakuru ava vataura mashoko aya mushure memusangano wavaita neChitatu wekuzeya nyaya dzesarudzo pamwe nemusangano weSADC wakatarisirwa kutanga neSvondo muguta guru re Mozambique re Maputo.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, avo vaverenga gwaro rezvabvumiranwa nevatungamiri ava, vati mapato avo haasi kuzopinda musarudzo kana misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika isati yazadziswa.
Vaenderera mberi vachiti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa sarudzo idzi dzisati dzaitwa zvakafanana nekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo kuti inangane nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Va Tsvangirai vatiwo mapato aya achaenda nezwi rimwe chete rekuti sarudzo dzisaitwe musi wa 31 Chikunguru usati wadarika sezvakataurwa nedare repamusorosoro.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC diki inotungamirwa naVa Welshman Ncube, Va Edwin Mushoriwa, vati dare repamusorosoro rinogona kuchinja mutongo warakatura kuti unangane nezvinodiwa neveruzhinji.
Vachipindura mubvunzo wemumwe mutori wenhau wekuti mapato aya acharamba achishanda pamwe chete here kusvika sarudzo dzaitwa, mutungamiri weMKD, VaSimba Makoni vati hapana chakaipa kuita izvi sezvo chavari kuvavarira huri hupenyu hwakanaka hwevana veZimbabwe.
Va Tsvangirai vati zuva rekuitwa kwesarudzo rinotarwa zvichienzaniswa nekutevedzerwa kwezviri mumitemo yenyika kwete zvekuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vangoita zanondega.
Zvichakadai, vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vasangana nekomisheni inowona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachisvitsa nhuna dzavo pamusoro pechirongwa chekunyoreswa kwevanhu sevavhoti chakatarisirwa kutanga munguva pfupoi iri kutevera.
Munyori anowona nezvesarudzo muMDC-T, VaSesil Zvidzai, vati bato ravo harisi kufara nekuti veruzhinji vari kunzi vanyorese sevavhoti panguva imwe chete vachinzi vawongorore kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti, kana kuti voters roll.
VaZvidzai vati bato ravo harisi kufara nekuti vanhu vakatorwa neZEC kuti vanodzidzisa vanhu nezvekuvhota vakabva nekupi.
Asi mutevedzeri wasachigaro weZEC, Amai Joice Kazembe, vati vanhu ava vashandi vehurumende vavakapihwa mazita avo nebazi rehurumende rinowona nezvekupinzwa kwevanhu mabasa re Public Service Commission.
Vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vasvitsawo nhuna dzakawanda dzinosanganisira mhando ine gwaro revavhoti vachiti harisi kunyatsoverengeka zvakanaka. Vatiwo havasi kufara nekusashambadzwa kwakakwana kwechirongwa chekunyoresa vanhu sevahoti chiri kuda kuitwa ichi.
Zvichakadai, VaTsvangirai, mushure mekupinda mumusangano wemapato asiri kufara nemutongo wedare repamusoro soro, vaita zvakare musangano neZEC kuti vazeye nyaya dzine chekuita nekunyoreswa kwevanhu sevavhoti pamwe nesarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa.